Hutano, 29 Zvita 2020
Chipiri 29 Zvita 2020
Zvita 29, 2020
Vatambi veZimbabwe Warriors Vapfumbamwe Vobatwa neCovid-19
Zimbabwe Football Association, Zifa, yazivisa kuti vatambi vapfumbamwe vari mukamba yemaWarriors vawanikwa vaine chirwere cheCovid-19.
Hurumende Yotarisira Kusimukira kweHupfumi Muna 2021 Vamwe Vachiti Mutora
Hurumende inoti ine tarisiro yekuti kuti hupfumi hwenyika huchakwira muna 2021 kunyangwe hazvo dzimwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu zvinogona kutonyanya kuipa.
Zimbabwe Yokurudzirwa Kutorawo Matanho ekuDzivirira Kupararira kweCovid-19 Zvichitevera Danho reSouth Africa
NeMuvhuro manheru mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, vakazivisa kuti kutanga pakati peusiku, nyika yavo yakanga yave kudzokera pa Level 3 senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
South Africa Yadzika Mitemo Yakaoma Mukurwisa Kupararrira Kwe Coronavirus
VaRamaphosa vanoti vanhu havachabvumidzwi kufamba pakati penguva dza 9 o’clock manheru nenguva dza 6 mangwanani. Vanoti kutengeswa kwehwahwa nokunwira hwahwa panzvimbo imwe chete zvambomiswa.
Murwiri weKodzero dzeVanasikana Muzvare Betty Makoni Vobatwa neCovid-19 keChipiri
Murwiri wekodzero dzevanasikana uye vakambotungamira sangano reGirl Child Network muZimbabwe, Muzvare Betty Makoni vakabatwa nechirwere cheCovid-19 kechipiri gore rino.
Mutori weNhau, Foster Dongozi, Aradzikwa Kumusha Kwake kuSanyati
Mutori wenhau ange ane mukurumbira, Foster Dongozi, aradzikwa neMugovera masikati kumusha kwake ku Sanyati, zvichitevera kushaya kwaakaita nemusi we Chitatu.
Zvita 25, 2020
Mutori weNhau, Foster Dongozi, Ovigwa kuSanyati neMugovera
Mutori wenhau, Foster Dongozi, uyo akashaya nemusi weChitatu achingosvika pachipatara cheParirenyatwa, havachakwanisi kuvigwa nevamwe vake vatori venhau sezvo Dongozi achinzi akafa nechirwere cheCovid-19.
Vakaremera Vokurudzira Hurumende Kuti Itore Matanho paKodzero Dzavo
Mumwe mudzidzi wezvemabhizinesi paHarare Polytechnic, Muzvare Tinotenda Gweshengwe, avo vakaremara, vanoti vakaremara vakawanda vari kusangana nematambudziko ekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo.
Mutori weNhau dzeMitambo, Tendai Ndemera, Anoradzikwa Zvine Mutsindo kuMarinda eZororo Memorial Park muHarare
Ndemera, uyo ange ave nemakore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa, aradzikwa pamberi pechaunga chakanyanya chacho chiri chevanhu vabva kuMbare.
Vatori veNhau Vanochema Kushaya kwaFoster Dongozi
Vakamboshanda naDongozi kuZimbabwe Union of Journalists, uko ashaya ari munyori mukuru wesangano iri, VaMathew Takaona, vaudza Studio7 kuti indasitiri yekuburitswa kwenhau yarasikirwa zvanyanya nekushaya kwaDongozi.